सुनको भाउ घट्यो, कति पुग्यो तोलाको ? – Khabar Silo
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा २ सयले घटेको छ। आइतबार ७० हजार २ सयमा कारोबार भएको सुन सोमबार २ सयले घटेर ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार सुन तोलामा ६ सयले घटेको थियो।
तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको ६९ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। आज चाँदी तोलाको ८४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार चाँदी ८४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सैद्धान्तिक आधार नै छैन : सिपी मैनाली
काठमाडौं । नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सैद्धान्तिक आधार नै नभएको दावी गरेका छन्। महासचिव मैनालीले कुन सिद्धान्तको आधारमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारालाई अघि सारेको ? भनि सरकारलाई प्रश्न पनि गरे। शनिबार काठमाडौंमा ‘अम्बिका साँवा स्मृतिग्रन्थ’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले ठूल्ठूला कुरा गरेपनि मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउन नसकेको […]
काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले महिला हिंसा अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बेजिङ्ग सम्मेलनको २५ वर्ष प्लस् राष्ट्रिय समिक्षा कार्यक्रमको अवसरमा आज, वियोण्ड वेजिङ्ग कमिटिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले सो कुरा बताएकी हुन्। उनले स्थानीय तहहरु जनताको नजिकै […]
धनवान् र वैभवयुक्त जीवन प्राप्तिका लागि नवरात्र